सुदूरपश्चिम Archives - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! सुदूरपश्चिम
भीमदत्तनगर, ४ माघ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले महाकाली नदीमा आधा दर्जन पक्की मोटर तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने बताउनुभएको छ ।
भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित महेन्द्रनगर उच्च माविको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै राजदूत रायले महाकाली नदीमा......
सुदूर खबर, डोटी, माघ ४ । गत वर्ष आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति बेहोरेको दौड तोलेनीले अझै राहत पाउन सकेको छैन। २०७२ साल साउन २५ गते आएको बाढीका कारण क्षतविक्षत भएका दौड र तोलेनी गाविसका जनता अझै राहत पाउने आशामा दिनरात कुरिरहेका छन्।
एक्कासि आएको अविरल बाढीले एकै घरका पाँच जनाको ज्यान लियो। 'गरिखाने जमिन......
काठमाण्डौँ, माघ ४ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको छ ।
सम्झौताअनुसार सीटीजीआईले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । सम्झौतामा......
सुदूर खबर, बैतडी माघ ४ । जिल्ला कारागार बैतडीमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी हुँदा समस्या भएको छ । चिसो बढेसँगै बसोबास तथा उपचारमा समस्या भएको हो । २५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा ४७ कैदी र एक थुनुवा गरी ४८ जना कैदीबन्दी हुँदा बस्न समस्या भएको जेलर अनिल तिवारी बताए ।
२०४२ सालमा निर्माण गरिएको कारागार......
बझाङमा भिरबाट लडेर एक किशोरीको मृत्यु
सुदूर खबर, बझाङ, माघ ३ । बझाङमा भिरबाट लडेर एक किशोरीको ज्यान गएको छ । घरबाट घाँस काट्नको लागि पारीमेला भन्ने जंगलमा घाँस काट्न गएकी बझाङको सुनकडा गाविस वडा नं. २ उडीकाटे गाँउ बस्ने डेरे ढाँटकी १७ बर्षिय कल्पना कुमारी ढाँटको आतबार बेलुका लडेर मृत्यु भएको स्थानिय मुकेश रावलले जानकारी दिएका छन् ।
१७ वर्षीया युवतीको शव झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो
सुदूर खबर,कञ्चनपुर, माघ ३ । कन्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिका–४ की १७ वर्षीया बिन्दू भट्ट घरबाट हराएको तीन दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परकी छन् ।
घरनजिकैको सिसौ झाडीमा झुन्डिएको अवस्थामा सोमबार बिहान शव फेलापरेको इलाका प्रहरी कार्यालय, झलारीका प्रहरी नायब निरीक्षक लालमणि जोशीले बताए ।
द्धन्द्धकालमा राईफल बोकेकी भगवती गिटी फोडेर दैनिकी चलाउँदै
सुदूर खबर, बैतडी, माघ ३ । द्धन्द्धकालमा राइफल बोक्दै हिडेकी बैतडीकी भगवती सार्किले अहिले गिटी फोडेर दैनिकी चलाइराख्नु परेको बताउनु भएको छ ।
६ कक्षा पढ्दै माओबादी भएकी उनलाई सेना समायोजनका बेला अयोग्य भनेर घर फर्काउदा पाउनुपर्ने कुनै रकम समेत नदिएर घरमा फर्काएको उहाँले बताउनु भयो ।
शुक्लाफाँटामा यो वर्ष पनि गैँडा स्थानान्तरण गरिने
सुदुर खबर, कञ्चनपुर, माघ ३ । चितवन निकुञ्जबाट कंचनपुरको शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्षमा यो वर्ष पनि गैँडा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । माघ र फागुन महिनामा गैंडा स्थानान्तरणको उपयुक्त समय भएकाले कोसीटप्पुबाट अर्ना ल्याउने काम सकिने बित्तिकै गैँंडा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरिने राष्ट्रिय निकुञ्ज......
सेती अञ्चल अस्पतालमा उपकरण अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या
सुदूर खबर, कैलाली, माघ ३ । सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीमा हेमोडाईलासिस उपचार सुरु भएको साढे तीन महिना पुरा भएको छ । हेमोडाईलासिस उपचार शुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाका मिर्गौलाका समस्या भएका विरामीहरु आउन थालेका छन् ।
डाइलाईसिस उपचारको लागि नाम दर्ता गरेका ४७ जना विरामीमध्ये अहिले १४ जनाको उपचार......
चिसो मौषमसँगै बझाङ्गमा दिन दाहाडै बन्यजन्तुको सिकार
सुदूर खबर, बझाङ, माघ ३ । बझाङ्ग लगायत सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा दिन दाहाडै बन्यजन्तुको सिकार खुलेयाम हुने गरेको छ । चिसो मौसम बढेसँगै बझाङ्गका सिकारीहरु बन्यजन्तुको खोजी गर्दै उच्च लेकाली भेगहरुमा भरुवा बन्दुक सहित टोलीमा सिकार गर्न पुग्ने गरेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी डाफे, मुनाल,......